Myanmar Gays Heaven: Blogger တောင်းပန်စာ နှင့် အမှာစာ...........
Blogger တောင်းပန်စာ နှင့် အမှာစာ...........
အားလုံးသော ချစ်ပရိတ်သတ်အပေါင်း ဒီဆိုဒ်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ အရင် ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်............ကျနော် အလုပ်တွေ လူမှုရေးတွေ နဲ့ လုံးပန်းနေတော့ ဒီဘက်ကို မလှည့်နိင်ခဲ့လို့ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်နော်...ခုကျနော် အချိန်ရရင် ရသလို ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်ဗျ... ဓာတ်ပုံပို့ပေးကြတဲ့ သူတွေကို လည်း တခုလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်..... ဓာတ်ပုံတွေကို တခုချင်းစီမပို့ပဲနဲ့ အများဆုံး ၅ ပုံ ကို အကောင်းဆုံးရွေးပြီး တစ်ခါတည်း ပို့ပေးပါလားဗျ မြန်မာကောနက်ရှင်းက သိတယ်မလား သိပ်အဆင်မပြေလို့ပါနော် နောက်ပြီး သယ်ရင်းတို့ ခံစားနေရတာတွေကို ရင်ဖွင့်ချင်ရင် စာရေးပြီး ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ကျနော် ပြန်တင်ပေးပါမယ်..... အားလုံး ကျေးဇူးဗျ...........
Posted by Hot Boy at 8:48 AM
mryan yan November 4, 2013 at 10:45 AM
Jas Ve November 8, 2013 at 2:51 AM
09400021660 Viberalso use,n ve ve singh is my fb
Peter König October 26, 2014 at 8:02 PM
ရိုးရာဓလေ့နောက်ကွယ်က အလွမ်းဌက်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ (အပိုင်...
Moy Thiha Kyaw ပါတဲ့ဗျာ................
နွေဦး လိပ်ပြာလေးရဲ ဧပြီလလွမ်းချင်း (အပိုင်း-၄ ) ဇ...
နွေဦး လိပ်ပြာလေးရဲ ဧပြီလ လွမ်းချင်း ( အပိုင်း -၃)
Who wana it?
အလွမ်းသစ်ပင်အောက်က စိတ္တဇည(အပိုင်း-၇ ဇတ်သိမ်း)
အလွမ်းသစ်ပင်အောက်က စိတ္တဇည (အပိုင်း-၅)
အလွမ်းသစ်ပင်အောက်က စိတ္တဇည (အပိုင်း-၄)
Do You Like These Guys.....?
ပထမဆုံး ပေးပို့လာတဲ့ Offer Boy လေးပါ...
သွေးနဲ ရေးတဲနလုံးသာ လွမ်းချင်း (အပိုင်း-၃) ဇတ်သိမ်...
လူစုံပဲဗျာ......ဘယ်သူတွေလဲတော့မသိဘူး ပို့ပေးတာ ကျေ...
Video Collection 14
မြန်မာလို့တော့ထင်တာပဲ မေးလ်ကနေပို့လိုက်လို့ တင်ပေး...
Zwe Zin Ko Ko, if u interest him...add landslidevi...
Ko Kyaw Oo.....
Edison Wung, hannaytun@gmail.com
နွေဦး လိပ်ပြာလေးရဲ ဧပြီလ လွမ်းချင်း( အပိုင်း-၂)